Paris-Nice တာဝေးပွဲ နောက်ဆုံးနေ့ပြီးစီး...Thomas အ၀ါရောင်အကျီရ...။ ~ Htet Aung Kyaw
Paris-Nice တာဝေးပွဲ နောက်ဆုံးနေ့ပြီးစီး...Thomas အ၀ါရောင်အကျီရ...။
2:08 AM Htet Aung Kyaw No comments
2 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 00:00:04
3 Richie Porte (Aus) Team Sky 00:00:12
(သတင်းတွေကုို ထပ်မတင်တော့ပါ...။ Live ရေးထားတာတွေကို ဆက်ဖတ်ပါရန်...)
ပြင်သစ်မှာ သီတင်းတပတ်တာကျင်းပနေတဲ့ Paris-Nice တာဝေးပွဲ ၇ ရက် မြောက်နေ့ သုို့မဟုတ် နောက်ဆုံးနေ့ (Nice - Nice) 141 km ပြိုင်ပွဲကုို ဒေသ စံတော်ချိန် မနက် ၁၁ နာရီခွဲ၊ (ရန်ကုန်အချိန် ၃ နာရီခန့်က) စတင်နေပါပြီ။
113km remaining from 141km (ကီလုို ၃၀ ခန့်စီးအပြီး) အထိခရီးရောက် နေပြီဖြစ်ပြီး ၆ ဦးပါ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့တခုက အုပ်စုကြီးကို ၃ မီနစ်ခန့်ဖြတ်ထားပြီး ပြေးနေပါတယ်။
ဒီနေ့ဟာ နောက်ဆုံးနေ့ဆုိုပေမဲ့ နံပတ် ၁ အဆင့် ၂ လုံး၊ ၂ အဆင့် ၂ လုံးနဲ့ ၃ အဆင့် ၃ လုံး စသဖြင့် တောင် ၆ လုံး၊ (အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးတောင်ဟာ မြေပြန့်အထိဆင်းပြီးမှ ပြန်တက်ရတဲ့တောင်ဖြစ် တာကြောင့်) ရှိတာကြောင့် GC သမားတွေအကြိတ်အနယ်ပြိုင်ကြရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တောင်တက်ရမဲ့ အကွာအဝေးနဲ့ ပေအမြင့်တွေကတော့...
Km 33.0 - Côte de Duranus, cat. 3
Km 41.0 - Côte de Levens, cat. 3
Km 55.5 - Côte de Châteauneuf, cat.2
Km 69.5 - Col de Calaison, cat. 2
Km 86.5 - Côte de Peille, cat.1
Km 118.5 - Col d'Èze, cat.1 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
After 81 km, the lead group has 3:25 on the field. ကီလုို ၈၀ ကျော်စီးပြီးချိန်အထိ ရွှေပြေးအဖွဲ့က ၃ မီနစ်ခွဲနိးပါးဖြတ်ပြီး ပြေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ၈၆ မှာ နံပတ် ၁ အဆင့် တောင် တလုံးရှိတဲ့အတွက် Peloton က ဖမ်းမိနုိုင် မနုိုင် စောင့်ကြည့်ရပါ့မယ်။
အခု (မြန်မာစံတော်ချိန် ၆ နာရီ) ချိန်ကစပြီး နော်ဝေး TV2 က Live ပြပါတော့မယ်။ Euro Sport TV ကတော့ နောက်ထပ် နာရီဝက်အကြာမှာ စတင်ပြသမယ်လုို့ ကြေညာထားပါ တယ်..။
Tinkoff အသင်းခေါင်းဆောင် Contador ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က လုို တုိုက်ခုိုက်မငတွေဆက်တုိုက်လုပ်ပြီး လက်ရှိ အ၀ါရောင်အကျီပိုင်ရှင် စကုိုင်းအသင်းက သောမတ်စ်တို့အဖွဲ့ကို ပြုတ်အောင်ဖြုတ်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းဝင်ဖုို့ကိလုို ၄၀ ကျော်အလုိုမှာ ...ပ အုပ်နဲ့ သူ့အကြားမှာ တမီနစ်ကျော်သာကျန်ပြီး သောမတ်စ်တုို့က ၃ မီနစ်ခန့်ကျန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Contador နဲ့အတူ သူ့အသင်းဖေါ် ၂ ဦးပါလာတဲ့အပြင် အခြား ရှေ့အုပ်က ပြုတ်ကျန်ခဲ့သူတွေ နဲ့ပေါင်းလုိုက်တော့ ၁၀ ဦးလောက်အထိ အင်အားရှိသွား။ ရှေ့ပြေးကိုမီဖုို့ ၁ မီနစ်ကျော်ကျော် သာလုိုပြီး စကုိုင်းအဖွဲ့က သူ့ကုိုမီဖို့ စက္ကန့် ၃၀ အလုိုနဲ့ အသဲအသန်လုိုက်နေ...။ ပွဲ အကောင်း ဆုံးအချိန်ဟုဆုိုနုိုင်..။ မပြေးတတ်ရင် ပြန်ဖမ်းမိသွားနုိုင်သေး...။
ဒီနေ့ ပန်းဝင်တဲ့ ၁-၁၀ စာရင်း...
Top Ten on the stage:
1 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 03:16:09
2 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo
3 Richie Porte (Aus) Team Sky
4 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 00:00:05
6 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ.fr
7 Rui Costa (Por) Lampre-Merida
8 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team
10 Ion Izagirre (Spa) Movistar Team
ရက်တာပွဲအပြီး GC ၁-၁၀ ရသွားသူများ...
the final GC for the 2016 Paris-Nice:
4 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 00:00:20
5 Ion Izagirre (Spa) Movistar Team 00:00:37
6 Sergio Luis Henao (Col) Team Sky 00:00:44
8 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 00:00:51
9 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 00:01:00
10 Rui Costa (Por) Lampre-Merida 00:01:07
Contador ဟာ အကောင်းဆုံးအရှုံးသမားဖြစ်သွားတယ်လုို့ထင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲမှာ အခါပေါင်းများစွာ ထွက်ပြေးခဲ့ပေမဲ့ မလွတ်ခဲ့ပါဘူး။ ကီလုို ၃၀ အလုို ထွက်ပြေးစဉ်က ၁ မီနစ်အထိလွတ်ခဲ့ပေမဲ့ ပြန်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။
တခါ နောက်ဆုံးအကြိမ် ၁၂ ကီလုိုဝန်းကျင် (နောက်ဆုံးတောင်) မှာထွက်ပြေးတော့ လည်း လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မလွတ်ပြန်ဘူး။ ... နောက်တချက်တွေ့ရတဲ့ သူရဲ့အားနည်းချက်က ကုန်းတက်ပဲလေ့ကျင့်ထားပြီး ကုန်းဆင်းလေကျင့်မထားဘူးထင်ရ။
အခု သောမတ်စ်ကပြောပြီ။ ၅၄ ဂီယာ နဲ့အသေလုိုက်နုိုင်လုို့ ဒုတိယ အုပ်ကုို သူမီသွားတာပါ တဲ့။
တကယ်ဆို သောမတ်ဟာ ကွန်ဒေတာတို့အဖွဲ့နဲ့ ပြတ်တဲ့အပြင် ဒုတိယ အုပ်ဆီကပါ ပြတ် ကျန်ခဲ့တာကြောင့် စက္ကန့် ၃၀ ကို ပြန်ဖြည့်ဖုို့ ဘယ်လုိုမှမလွယ်တဲ့အနေအထားပါ။
ကွန်ဒေတာ ပန်းအ၀င်မှာ (ကုန်းအဆင်းမှာ) ဒီထက် အရှိန်ပုိုတင်ပြေးရင် ဘာဖြစ်မလဲ...။
အရှိန်ကုန်နေလုို့လား၊ အကွေ့အကောက်များလုို့ ထိမ်းနေတာလား။
နောက်တခုက တကယ်လုို့ သူ ပထမ ရမယ်ဆုိုရင် အချိန်ပိုဆု ၁၀ စက္ကန့်ထပ်ရမယ်ထင်။ မနေ့က သူပြတ်နေတာက ၁၅ စက္ကန့်တည်း။ ဒီနေ့မှာ သူက သောမတ်စ်ကို ဖြတ်နုိုင်တာက ၇ စက္ကန့်တည်း။ သချာ်အရတွက်တော့ ပထမ ရရင် ၁၇ စက္ကန့်ဆုို ၂ စက္ကန့်အသာနဲ့နုိုင်ပြီ။ အခုတော့ ဒုတိယဆုိုတော့ အပိုဆု ၆ စက္ကန့် + ၇ ဆုိုတော့ ၁၃ ဆုိုတော့ ၄ စက္ကန့်တည်းနဲ့ ဒုတိယ ဖြစ်သွားပါကြောင်း...။
မနက်ဖြန်မှာ (ဒီနေ့ နှင်းကျလုို့ ရပ်ထားရတဲ့) Tirreno-Adriatico ရဲ့ ၅ ရက်မြောက်ပွဲ လာဖုို့ရှိနေပါတယ်။ Castelraimondo ကနေ Cepagatti အထိ 210km ပွဲဟာ မြေပြန့်များ တာကြောင့် ပီတာဆာဂန်များ ပြန်ရမလားလုို့ မှန်းနုိုင်ပါသေးတယ်။
သဖက်ခါမှာတော့ ITT တဦးချင်းစံချိန်ပြုနဲ့ ဒီပွဲကို အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်နဲ့ အီတလီက သီတင်းတပတ်ကြာ ဒီပွဲကြီး ၂ ပြီးရင် စပိန်မှာ ဧရာမပွဲတခုလာပါ လိမ့်မယ်။ ဧရာမလုို့ခေါ်ရတာကတော့ March 21-27, Calella, Catalunya ပွဲမှာ ဒီနေ့ ဒုတိယ ရသွားတဲ့ ကွန်ဒေတာအပါဝင် တခြား Grand Tour (၂၁ ရက်တာပွဲ) ချန်ပီယံတွေ ဖြစ်တဲ့ တုိုးဒီဖရင့်ချန်ပီယံ ခရစ်ဖရိုး၊ စပိန်ပွဲချန်ပီယံ အရူနဲ့အတူ တုိုးဒီဖရင့် ၂ ကြိမ် ဒုတိယ ရထားသူ ကင်တားနားအပါဝင် အကျော်အမော်အားလုံး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာမုို့လုို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီပွဲမတုိုင်ခက် လူစိတ်ဝင်စားတဲ့ Spring Classics ပွဲကြီးတခုလည်းရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ၁၉ ရက်နေ့ (ရှေ့တပတ်စနေ) မှာကျင်းပမဲ့ March 19, 2016, Milan, Italy, Road - WorldTour ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပီတာဆာဂန်အပါဝင် Classics သမားတွေနဲ့ အကျော် အမော်အားလုံးနီးပါး ၀င်ပြိုင်ကြမယ်လုို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ။
(Agree on disagree) မြန်မာအများစုနဲ့ မတူတဲ့အမြင်က...
Tour of Flanders ပွဲ ဘယ်သူနုိုင်ခြေရှိသလဲ...။
De Panne ပွဲ ဒုတိယနေ့ Viviani အနုိုင်ရ...။
ဒီမိုကရေစီ အသီးအပွင့်ကို အားလုံး ခံစားခွင့်ရှိရမည်
မတ်လ ၂၉ မှတ်စုများ...။
စက်ဘီးသမား နောက်တဦး ဆုံးပြန်ပြီ။
စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအစိုးရ ဟုတ်ရ...
မတ်လ ၂၈ ရက် မှတ်စုများ...။
Gent-Wevelgem ပွဲအတွင်း လဲပြိုဒဏ်ရာရသူ Antoine Dem...
တုိုက်ခုိုက်ရေးခေတ်မှ တည်ဆောက်ရေးခေတ်သို့ လှမ်းမေ...
Gent-Wevelgem ပွဲမှာ Peter Sagan တကယ်နုိုင်ပါပြီ...။
VoltaaCatalunya ပွဲပြီးစီး ကင်တားနား GC ပထမ ရရှ...
E3 Harelbeke ပွဲ Peter Sagan ဒုတိယ ဖြစ်ပြန်ပြီ...။
ဘားအံ ဖိတ်ခေါ်ပွဲ ဘယ်သူတွေ ၀င်စီးမလဲ...။
VoltaaCatalunya ပွဲ စုစည်းချက် ပထမ ပုိုင်း။
Milan-San Remo ပွဲမှာ Arnaud Demare (Fra) FDJ အနု...
Strade Bianche 2016 ပွဲ Cancellara အနုိုင်ရ။
Paris-Nice တာဝေးပွဲ နောက်ဆုံးနေ့ပြီးစီး...Thomas ...
Tirreno-Adriatico ပွဲပြီးစီး Peter Sagan ဒုတိယ နဲ...
၂၈ နှစ်ကြာ ခရီးကြမ်းရဲ့ အလွန်